Qalabka Android - Telefoonnada, kiniiniyada, smartwatch iyo in ka badan! | Androidsis (Bogga 16)
Laba nooc oo ka mid ah Oppo Reno ee soo socota ayaa lagu caddeeyay Snapdragon 710
Oppo waxaa loo qorsheeyay inuu soo bandhigo taleefankii ugu horreeyay ee casriga ah ee cusub ee 'Reno' 10-ka Abriil Dhanka kale,…
Xaqiijiyay dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha Huawei P30 iyo P30 Pro
Dhammaan faahfaahinta naqshadeynta iyo astaamaha Huawei P30 iyo Huawei P30 Pro waa la dusiyay.Sidee shaqaaladda soo socota ee Huawei u ekaan doontaa?
Google wuxuu kaloo ku shaqeyn lahaa taleefan casri ah oo isku laaban
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan rukhsaddan oo muujineysa in Google uu hadda ka shaqeynayo taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee isku laaban iyada oo aan lahayn taariikh rasmi ah oo la bilaabayo.
Snapdragon 865 wuxuu taageeri doonaa heerka cusub ee Qualcomm HDR10 +
Snapdragon 865 ee soo socda, oo noqon doona darajada xigta ee heerka labaad ee Qualcomm SoC, wuxuu taageeri doonaa heerka Qualcomm HDR10 +.
Redmi Note 7 Pro lagama furayo Spain
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka barnaamijka 'Redmi Note 7 Pro' ee Spain, oo aan dhici doonin, sida ay xaqiijisay Xiaomi lafteeda.
Faafin rasmi ah oo cusub oo loo yaqaan 'Oppo Reno' ayaa soo baxday iyo faahfaahin dhowr ah oo ku saabsan noocyadeeda iyo qiimaheeda sidoo kale
The Oppo Reno waxaa loo qorsheeyay inuu rasmi ahaan 10-ka Abriil uga howlgalo Shiinaha. Kahor maalintaas intaanay gaarin, boodhadh cusub iyo faahfaahin badan oo ku saabsan ayaa soo baxay.
Pixel 4 xaday: la kulan calanka soo socda ee foornada ku jira
Waxaan horeyba uheynay wararkii ugu horreeyay iyo soosaarida Google ee Pixel 4. Way soo if baxeen oo waxaan si faahfaahsan uga hadlaynaa dhinacyo kala duwan oo naqshaddeeda ka mid ah taasna mahadsanid
Bixby durba waa karti u aqoonsan kartaa heesaha sida Shazam oo kale
Waxqabadka ugu dambeeyay ee kaaliyaha Samsung uu helay, Bixby wuxuu noo ogolaanayaa inaan aqoonsanno heesaha iyadoon la adeegsan Shazam ama wax la mid ah
Cusbooneysiin soo socota ayaa hagaajin doonta khaladaadka ku jira barnaamijka kaamirada iyo shaashada sawirka shaashadda ee Nokia 9 Pureview
Nokia 9 Pureview waa taleefankii ugu horreeyay ee suuqa soo gala oo wata kamarad penta ah. Waa…
Xiaomi Poco F1 Lite ayaa markii ugu horreysay ka muuqda Geekbench
Waxaa jira Little F1 Lite. Qalabkani wuxuu ku dhici karaa suuqa maadaama lagu soo bandhigay Geekbench oo faahfaahinaya qaar ka mid ah astaamaha la jarjaray.
Soo dejiso sawirada Galaxy Fold
Haddii aad raadineyso meesha aad ka soo dejineyso sawirrada taleefannada casriga ah ee isku laaban Samsung, Galaxy Fold, waxaad heshay meeshii saxda ahayd.
Mar labaad: Samsung Galaxy Note 10 waxay la imaan doontaa isku xirnaanta 5G, sida la filayo
Magaca summada ee Samsung Galaxy Note 10 waxaa laga helay koodhka ilaha ee ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan isku xirnaanta shabakadda 5G.
Huawei, Samsung iyo LG, oo ka mid ah shirkadaha diiwaangeliyey codsiyada ugu badan ee patent-ka ee 2018 [+ Ranking]
Huawei, Samsung iyo LG waxay fadhiyaan kaalinta labaad, saddexaad iyo afraad ee qiimeynta shirkadaha soo saaray codsiyada ugu badan ee rukhsadda 2018.
Telefoonada Xiaomi ee soo socda ee cusbooneysiin doona Android Pie ayaa shaaca laga qaaday
Soo ogow liiska taleefannada casriga ah ee Xiaomi oo marin u heli doona cusboonaysiinta 'Android Pie' wax yar, sida ay shirkaddu xaqiijisay.
Huawei Nova 4e: Nooca casriga ah ee casriga ah ee nooca dhexdhexaadka ah
Soo ogow qeexitaanka Huawei Nova 4e, casriga cusub ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha, kaas oo horeyba loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Samsung horeyba waxay ugu shaqeysaa "shaashadda oo dhan" iyadoo leh kamarad sawir qaade ah shaashadda hoosteeda
Samsung horey ayey uga shaqeyn laheyd waxa noqon lahaa "shaashadda oo dhan" oo leh kamarad sawir qaade ah oo aan la arki karin marka ugu horeysa.
Asus ZenFone Max Shot iyo ZenFone Max Plus M2, labadii taleefan ee ugu horreeyay ayaa lagu shaaciyey Snapdragon SiP 1
Asus waxay ku dhawaaqday laba taleefan oo cusub: Azenfone Max Shot iyo Zenfone Max Plus M2, oo labadaba leh Snapdragon SiP 1 SoC cusub.
Kiniiniyada ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Haddii aad raadineyso kiniin aad ku siiso maalinta Aabbaha, qodobkaan waxaan ku tusinaynaa kuwaas oo ah xulashooyinka ugu fiican suuqa ee leh Android
Nokia 3.1 wuxuu helayaa Android Pie
Maanta, HMD Global waxay ku dhawaaqday in cusbooneysiinta Android Pie loo heli karo Nokia 3.1.
Huawei wuxuu fayl gareeyaa shati cusub oo muujinaya aalad casri ah oo laba shaashad leh
Sida laga soo xigtay warbixinno cusub, Huawei waxay tixgelinaysaa taleefan casri ah oo leh laba muuqaal. Sawirada waxaa lagu faahfaahiyay milkiilaha.
Samsung waxay ku darsatay qayb cusub barnaamijka Galaxy Themes ee S10
Mawduucyada 'Galaxy Themes' ayaa hadda lagu soo daray qayb cusub oo aan ka heli karno gidaarro loogu talagalay Galaxy S10 3 nooc oo kala duwan
Noocyada cusub ee kamaradaha 'Huawei P30 Pro' waxay si faahfaahsan u awoodaan qalabka zoom lens-ka
Maamulaha guud ee shirkada Huawei ayaa shaaca ka qaaday muunado cusub oo kamarad ah oo loo yaqaan 'Huawei P30 Pro' taas oo sadex nooc oo toogasho ah la isbarbar dhigayo, laba ka mid ahi ay aad isugu dhowyihiin
Huawei waxay dooneysaa inay soo bandhigto taleefannada isku laabma wax ka yar 1.000 euro
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigi doonta taleefannada casriga ah ee laba laabmaya muddo labo sano gudahood ah wax ka yar 1.000 euro oo qiimahoodu yahay, sida uu ku xaqiijiyay agaasimaheeda wareysiga.
Xiaomi ayaa ku jirta kaalinta 11-aad ee adduunka si loo soo saaro codsiyada ugu badan ee AI
Xiaomi waxay ku jirtaa kaalinta 11-aad ee adduunka marka laga hadlayo arjiga AI, oo ay garaacday Huawei iyo Qualcomm.
Waxbadan ka ogow tijaabinta iska caabinta ee uu soo maray Xiaomi Mi 9, baaritaanka caanka ah ee JerryRigEverything iyo haddii uu ka gudbo iyo in kale.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan soo gelitaanka Vsmart, oo ah nooca ay leedahay BQ isla markaana isku diyaarinaya inay soo galaan Spain hadda bishan.
Hisense la yaab leh ayaa ka diiwaangashan TENAA oo leh batari weyn oo ah 5,360 mAh
TENAA waxay xaqiijisay qaar ka mid ah astaamaha farsamo ee muhiimka ah ee Hisense cusub oo qarsoodi ah, waana kuu soo bandhigeynaa hoosta.
48 kambiyuutarrada kamaradaha ee Oppo Reno, taleefankii ugu horreeyay ee taxanaha, ayaa iftiiminaya
Oppo waxay daaha ka qaaday dhowr shay oo kamarad ah oo laga helay taleefanka Oppo Reno, waxyar uun ka hor inta aysan bilaabin bisha soo socota, ee Abriil.
Huawei P30 wuxuu la imaan doonaa waxyaabo lama filaan ah oo ku saabsan qaabka kamaradaha habeenkii [Teaser]
Tijaabin cusub oo loogu talagalay Huawei P30 ayaa muujineysa in taleefanka casriga ah uu la imaan doono dhowr la yaab leh oo ah qaabka kamaradaha habeenkii.
Tani waa sida ay u ekaan karto Samsung Galaxy Note 10
Haddii aad rabto inaad fikrad ka hesho waxa jiilka cusub ee Galaxy Note noqon doono, ka dib waxaan ku tusinaynaa kuwii ugu horreeyay.
Samsung Galaxy A9 ayaa loo cusbooneysiiyay Android Pie
Terminalkii ugu dambeeyay ee Samsung ee bilaabay inuu cusbooneysiiyo Android Pie waa Galaxy A9 2018
AnTuTu wuxuu xaqiijinayaa qeexitaannada muhiimka ah ee Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro waxaa lagu faahfaahiyay keydka macluumaadka ee 'AnTuTu' oo ay weheliso natiijada baaritaanka iyo dhowr ka mid ah tilmaamaheeda muhiimka ah.
HTC waxay xaqiijineysaa marka HTC U11, U11 + iyo U12 + ay lahaan doonaan Android Pie
Raadi wax badan oo ku saabsan taariikhda markii cusbooneysiinta Android Pie loo sii deyn doono HTC U11, U11 + iyo U12 + sida ay shirkaddu xaqiijisay.
Samsung waxay patent-ka u leedahay taleefan la laaban karo si loogu xidho curcurka
Raadi wax badan oo ku saabsan patent-ka cusub ee Samsung oo muujinaya taleefan casri ah oo la laaban karo oo ku laalaaban curcurka sida saacadda.
Taxanaha 'Huawei P30' waa la caddeeyay, dhowr ka mid ah qeexitaannadiisa ayaa soo ifbaxay
Taxanaha P30 wuxuu kakoobanyahay Huawei P30, P30 Lite iyo P30 Pro. Dhamaan sedexda noocba horey ayaa shahaado looga siiyay Indonesia iyo Taiwan.
Xiaomi waxay soo saartay beta-ka Android Pie ee loogu talagalay Mi 6X
Xiaomi ayaa lagu soo waramayaa inuu bilaabay tijaabinta gudaha ee cusbooneysiinta Android 9.0 Pie ee Mi 6X ee Shiinaha.
Xaqiijiyay qiimaha nooc ka mid ah Galaxy A50
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha mid ka mid ah noocyada Samsung Galaxy A50 uu ku yeelan doono bilowgeeda dukaamada, sida horeyba loo shaaciyey.
Huawei horeyba wuxuu u leeyahay nidaamkiisa hawlgalka u gaarka ah diyaar
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda nidaamka hawlgalka ee shirkadda Huawei, sida uu xaqiijiyay madaxa shirkadda u gaarka ah.
Huawei P30 Pro wuxuu marayaa Geekbench oo leh Kirin 980 iyo 8 GB oo RAM ah
Waxaa loo diiwaangaliyay 'Huawei VOG-L29' ('VOG' waa loo gaabiyaa Vogue, magaceeda), Huawei P30 Pro wuxuu soo maray Geekbench.
Samsung waxay qorsheyneysaa inay soo saarto shirkad qiimo jaban sanadkan
Xog cusub ayaa sheegeysa in Samsung-ka Kuuriyada Koonfureed ee Samsung ay qorsheyneyso inay soo saarto taleefan miisaaniyadeed oo jaban.
Saacadaha ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha
Haddii aadan weli go'aansan inaad iibsato smartwatch, markaa waxaan ku tusi doonaa kuwa leh qiimaha ugu fiican ee xulashooyinka lacagta ee suuqa.
Xiaomi Black Shark 2 wuxuu marayaa AnTuTu wuxuuna diiwaangelinayaa dhibco aan caadi aheyn oo ka badan 430K
Xiaomi Black Shark 2 wuxuu soo maray barnaamijka tijaabada 'AnTuTu' wuxuuna ka diiwaan galiyay dhibco sare oo ka badan 430 kun.
Nokia 6.2 ayaa la soo bandhigi doonaa guga
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka Nokia 6.2 ee dukaamada, kaas oo dhici doona guga si rasmi ah, sida horeyba loo shaaciyey.
Oppo waxay dib u naqshadeyneysaa astaanteeda: waxay noqon kartaa bilowga marxalad cusub oo shirkadda ah
Oppo waxay umuuqataa inay mashquulsantahay dhawaanahan, kana shaqeyneyso taxanaha soo socda ee OPPO Reno oo leh 10X tiknoolajiyad zoom ah. Hada waxaad leedahay astaan ​​cusub.
Shixnadaha taxanaha ah ee Mate 20 ayaa ka badan 10 milyan oo unug
Shirkadda Huawei ayaa ku dhawaaqday in taleefoonkeeda casriga ah ee casriga ah ee Mate 20 ay rareen in ka badan 10 milyan oo unug muddo 4 bilood iyo badh ah.
Samsung waxay rukhsad siisay taleefan casri ah oo isku laaban
Ka ogow wax badan oo ku saabsan patent-ka cusub ee laaban-lahaanshaha shirkadda Kuuriya ee ka shaqeeya nidaamyada casriga ee cusub ee sannadka 2020. patent Samsung.
Fitbit Versa Lite waa bilowga cusub ee Fitbit loogu talagalay smartwatches
Fitbit ayaa hadda soo bandhigtay nooc cusub oo ka mid ah Fitbit Versa, Lite, oo ah nooc ka jaban oo jaraya astaamaha qaar ka mid ah nooca buuxa.
Huawei P30 Lite wuxuu muujinayaa muruqyadan tilmaamahan
Tijaabooyinka waxqabadka ayaa la daadiyay iyadoo la muujinayo kartida Huawei P30 Lite. Miyay ku filnaan doontaa inaad ka fiicnaato tartamayaashaada?
Oppo Reno, oo ah taleefanka casriga ee soo socda oo leh Snapdragon 855 oo si rasmi ah loogu dhawaaqay bisha Abriil
Madaxweyne ku xigeenka Oppo Brian Shen wuxuu ku dhawaaqay taxane cusub oo telefoonada Oppo ah, waxaana loogu magac daray 'Reno'. Mobilada ugu horeeya ee qoyskani wuxuu imanayaa Abriil.
MIUI 10.2.3 cusbooneysiin xasilloon ayaa ku timid Pocophone F1 oo leh feejignaanta amniga Febraayo
Pocophone F1 wuxuu helay cusbooneysiin kale, waana MIUI 10.2.3.0. Kani wuxuu keenayaa Febraayo 2019 balastar amni iyo in ka badan.
Vivo X27 Pro Poster Leaked Leaks wuxuu kusii siqayaa Naqshadeynta Kaamirada Pop-Up; Qeexitaannada iyo qiimayaasha ayaa sidoo kale loo daah furay X27 iyo S1
Vivo waxay soo saari doontaa Vivo X27 si dhakhso leh. Telefoonkani wuxuu yeelan doonaa nooc Pro ah oo ku imaan doona shaashad balaaran iyo kamarad aad u ballaaran.
Noocyada sirta ah ee loo maleynayo in loo haysto Sony Xperia 4: Snapdragon 710, 21: 9 Soo bandhigid CinemaWide iyo in ka badan
Sony waxay ku shaqeyn laheyd taleefan casri ah oo ka xoog badan noocyada Xperia 10, waxayna noqon laheyd Sony Xperia 4.
Konsol-ka Google wuxuu rasmi ahaan doonaa maalmo yar gudahood
19-kii Maarso Shirweynihii Horumarinta Ciyaaraha waxaan ugu dambeyn la kulmi karnaa qalabka ciyaarta fiidiyoowga ah ee Google muddo dheer la sugayay, waxay ahayd waqtigii!
Huawei Nova 4e wuxuu marayaa Geekbench oo leh Kirin 710 iyo 6 GB oo RAM ah
Kahor intaan Huawei Nova 4e laga bilaabin Shiinaha maalmo yar gudahood, telefoonka ayaa ka muuqday bogga tixraaca Geekbench.
Boosaska Galaxy S10 waxay ka badan yihiin iibka Galaxy S9 ee Shiinaha
Ka ogow wax badan oo ku saabsan guusha xayeysiinta Galaxy S10 ee Shiinaha toddobaadyadan rajo gelinaya Samsung.
Qalabka ugu fiican ee la bixiyo Maalinta Aabbaha wax ka yar 15 euro
Ku soo uruurinta hadiyadaha ugu fiican Maalinta Aabbaha haddii aad xal u raadineyso qiimo wanaagsan oo aad isaga yaabiso.
Galaxy J8 wuxuu isu diyaarinayaa inuu helo Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta loo bilaabi doono Samsung Galaxy J8 oo marin u heli doonta Android Pie bisha Abriil ee sannadkan.
Samsung waxay rajeyneysaa inay iibiso 45 milyan oo ka mid ah Galaxy S10 sanadkan
Raadi wax badan oo ku saabsan iibka ay Samsung rajeyneyso inay ku dhex yeelato inta u dhexeysa Galaxy S10, oo ballanqaadaya inuu dhaafi doono tiradii sanadkii hore.
Maamulaha Blackberry ma aqbali karo isku laabashada taleefannada casriga ah maxaa yeelay "aad ayey u badan yihiin"
Sida laga soo xigtay madaxa shirkadda Blackberry, John Chen, marka lagu daro inuu leeyahay qiime aad u sarreeya, taleefannada gacanta ee laalaabaa aad ayey u badan yihiin.
Sifeeyay qiimaha suurtagalka ah ee Sony Xperia 1 Yurub
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha la dusiyay ee Sony Xperia 1 uu lahaan lahaa, taas oo caddeynaysa in dhamaadka-sare uusan raqiis noqon doonin.
Samsung Wearable hadda waxaa lagu heli karaa naqshadda One UI
Codsiga Samsung Wearable ayaa hadda la cusbooneysiiyay iyadoo la adeegsanayo isku-xirka 'One UI interface' ee Galaxy-ka lagu cusbooneysiiyay Android Pie
Xiaomi waxay geyn doontaa hawl cusub oo ah marin u helka tooska ah ee barnaamijyada iyada oo loo marayo akhristaha faraha ee shaashadda ilaa Mi 9 iyo Mi 9 SE
Xiaomi waxay hirgelin doontaa hawl u oggolaaneysa isticmaalka akhristaha shaashadda shaashadda si toos ah oo dhakhso leh u fura wixii ...
Shirkadda Huawei ayaa soo bandhigi doonta laba taleefan oo cusub oo aan lahayn Wear OS
Labada smartwatches ee soo socda ee ay Huawei ka bilaabi doonto suuqa ayaa sii wadi doona inay maamusho Wear OS, taasoo dhabar jab hor leh ku ah sheegashada Google ee suuqa la gashan karo.
Samsung Galaxy A90, A20e iyo A40 ayaa ku daatay barta rasmiga ah ee Samsung ee UK
Samsung Galaxy A90, A40 iyo A20e ayaa si qarsoodi ah looga helay bogga rasmiga ee Samsung ee UK. Tani waxay muujineysaa in sii deyntoodu ay dhowdahay.
Samsung Galaxy A8 + (2018) wuxuu cusbooneysiiyaa Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' ee bilaabaya inuu gaaro Samsung Galaxy A8 + (2018) ee Ruushka oo sii ballaaraya.
Samsung waxay siisaa 6 Bilood oo ah Lacag Bixinta Lacagta 'Spotify Subscription' ee Galaxy S10 Buyers
Waqtigan xaadirka ah dalabkan waxaa kaliya laga heli karaa Mareykanka wuxuuna u oggolaanayaa helitaanka 6 bilood oo bilaash ah adeegga muusikada ee Spotify.
Galaxy S10 waxaa loo isticmaali karaa sidii xayiraad xadhig lacag la'aan ah inta lagu jiro amarka
Nidaamka dib u celinta ee 'Galaxy S10' wuxuu awood u leeyahay inuu ku dalaco aaladaha kale ee wireless-ka ah inta uu ku shaqeynayo fiilada.
Xiaomi waxay soo bandhigi kartaa Black Shark 2 bisha Maarso 18
Jiilka labaad ee Xiaomi's Black Shark waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigi karaa bisha Maarso 18.
Fiidiyowgan fikradda ah wuxuu na tusayaa naqshadda suurtagalka ah ee Samsung Galaxy Fold 2
Waxaan ku tusineynaa fiidiyow feker ah oo ina tusaya sida ay u noqon karto bedelka Samsung Galaxy Fold 2. Miyaad jeceshahay naqshadda taleefanka isku laaban ee Samsung?
Xiaomi waxay ku dhawaaqday inay sare u qaadi doonto qiimaha taleefannadooda cusub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan kororka qiimaha ee taleefannada Xiaomi ee garaacaya dukaamada bilaha soo socda ay yeelan doonaan.
OPPO si ay u bilawdo taleefanka zoomka indhaha ee 10x bisha Abriil
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan taariikhda la bilaabayo taleefanka ugu horreeya ee OPPO oo adeegsan doona tiknoolajiyaddiisa zoom ee 10x oo noqon doonta Abriil.
ZTE wuxuu patent ka helayaa taleefan si toos ah u laalaabmaya
Ka ogow shatiga cusub ee ZTE oo muujinaya taleefan casri ah oo si qumman u laalaabmaya, isla dhexda. Fasax cusub oo loogu talagalay nooca Shiinaha.
Sharaf Magic 2 3D: Nooca la casriyeeyay ee taleefanka ayaa rasmi ah
Soo ogow wax walba oo ku saabsan nooca cusub ee taleefanka, tan 'Honor Magic 2 3D' ee la socota dareeraha 3D ee dhinaca hore sida isbeddelka ugu weyn.
Dhamaan daaqadaha dahaarka ee shaashadda ee Galaxy S10 iyo S10 +
Waxaan soo ururinay dhammaan sawirada xiisaha leh ee loogu talagalay Galaxy S10 kuwaas oo diiradda saaraya godadka shaashadda u oggolaanaya hal-abuurnimo weyn.
Realme 3 Habka kamaradda Nightscape - taleefannada kale ee summada leh iyaguna way yeelan doonaan
Realme waxay soo saartay muuqaalkeeda Nightscape, oo lagu soo bandhigay Realme 3, haddana laga heli doono qalabka kale ee shirkadda.
Teknolojiyada Game Turbo wuxuu imaan doonaa Xiaomi Mi 8 Pro
Xiaomi Mi 8 Pro wuxuu heli doonaa tikniyoolajiyad cusub oo loo yaqaan 'Game Turbo' oo ku dhex jirta shirkadda cusub ee 'Xiaomi Mi 9'.
Redmi Note 7 Pro waxay ku faantaa habka habeenkii [Sawir]
Lu Weibing ayaa soo bandhigay qaabka habeenkii ee Redmi Note 7 Pro iyada oo loo marayo sawir lagu daabacay Weibo, shabakada bulshada ee Shiinaha.
Galaxy S10 way ka dhib badan tahay dayactirkiisa kii ka horreeyay sida uu sheegayo iFixit
Ragga jooga iFixit waxay falanqeeyeen boosteejooyinka cusub ee kala duwanaanta Galaxy S10 iyo darajada la helay ayaa mar kale aad u hooseysa, sida kuwii ka horreeyayba.
Huawei P Smart + 2019: Nooca cusub ee bartamaha
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Huawei P Smart + 2019, taleefanka cusub ee dhexdhexaadka ah ee ka imanaya astaanta Shiinaha ee horay loo soo bandhigay.
Huawei P30 Lite waxaa la soo bandhigi doonaa 14-ka Maarso
Waxaan horeyba u haysanay taariikh rasmi ah oo aan kula kulanno Huawei P30 Lite. "Walaalka yar" ee P30 iyo P30 Pro wuxuu yimaadaa maalmo yar uun ka hor meesha ugu sareysa
Soo ogow xulitaankan casriga ah ee aad bixin kartid Maalinta Aabbaha sannadkan. Taleefannada casriga ah ee dhammaan noocyada la heli karo,
Maamulaha Sony wuxuu sharraxayaa sababta shirkaddu waligeed u yeelan taleefannada leh kamaradaha waaweyn
Maamulaha sare ee suuq geynta caalamiga ah ee Sony Adam Marsh ayaa hada daaha ka qaaday sababta Sony aysan waligood u sii deynin taleefanada leh kamaradaha wanaagsan.
Sida loo rakibo xasilloonida Android Pie oo leh MIUI 10.2.1 Xiaomi Mi Max 3: cusboonaysiinta ayaa timid
Xiaomi waxay bilowday inay soo bandhigto xasilloonida MIUI 10.2.1 ee ku saleysan Android 9.0 Pie ee Mi Max 3, Shiinaha, iyada oo loo marayo OTA.
Maamulaha Meizu wuxuu leeyahay Meizu Zero wuxuu ahaa tijaabo suuq geyn ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan baajinta bilaabida Meizu Zero iyo cudurdaarrada uu agaasimaha guud ee shirkaddu ka soo saaray kiiskan.
Xiaomi's Redmi Note 7 ayaa si rasmi ah u timid Spain
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qiimaha ay Redmi Note 7 ku lahaan doonto bilowgeeda Spain dhammaan noocyadeeda iyo taariikhda ay bilaabaneyso.
Qualcomm wuxuu diyaariyaa jajab cusub oo hooseeya: wuxuu ka muuqanayaa Geekbench
Qualcomm wuxuu ka shaqeynayay Chipset cusub oo aad u hooseeya oo awood u siin lahaa taleefannada casriga ee soo socda ee Android Go.
Meizu Xusuusin 9: Nooca cusub ee bartamihiisu waa rasmi
Ka raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Meizu Note 9, bartamaha cusub ee nooca Shiinaha ee dhowaan laga bilaabi doono Shiinaha.
Xiaomi Mi 9 wuxuu bilaabaa inuu helo cusbooneysi cusub oo leh hagaajinta kamaradda
Xiaomi waxay sii deyneysaa cusbooneysiin cusub oo ku saabsan nooca caalamiga ah ee astaanteeda cusub, ee Xiaomi Mi 9. Midkani wuxuu la yimaadaa horumarin xagga kamaradda ah.
Samsung waxay ka shaqeyneysaa laba taleefan oo cusub oo isku laaban
20-kii Febraayo, Samsung waxay si rasmi ah u soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay laabashada taleefannada casriga ah, oo ah sharad in dad badani ay ...
Sony iyo Xperia 1 ee ka soo horjeedda mawjadaha, ma dejin doontaa isbeddel?
Sony waxay ku guuleysatay inay soo jiidato indhaha suuqa iyadoo loo marayo Xperia 1, oo ah smartpnone leh khadad dhaqameed oo keena waxyaabo badan oo cusub
Nokia 2 wuxuu helaa nooca xasiloon ee Android Oreo iyadoo loo marayo cusbooneysiin cusub
Ku dhowaad hal sano ka dib tan iyo markii ay heshay nooca beta ee Android 8.1 Oreo, nooca xasilloon ee cusbooneysiinta ayaa hadda u wareegaya Nokia 2.
Rasmi: Huawei P30 Pro wuxuu kaydin doonaa muraayadaha indhashareerka "super zoom"
Clement Wong wuxuu xaqiijiyay in Huawei P30 Pro uu la imaan doono kamarad zoom u eg periscope oo bixin doonta awooda "super zoom".
Xiaomi wuxuu daaha ka qaadi doonaa qaar ka mid ah wararka imaan doona MIUI
Soo ogow soo jeedimaha isticmaaleyaasha ee ay Xiaomi aqbashay kuna soo bandhigi doonto MIUI mustaqbalka dhow, sida horayba loo xaqiijiyay.
Pocophone F1 wuxuu helayaa taageero loogu talagalay duubista 4K ee fps 60 iyada oo loo marayo cusbooneysiinta
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee beta ee hadda ku socota Pocophone F1 waxaa ku jira taageero loogu talagalay duubista fiidiyowga ee 4K ee 60fps.
10-ka taleefan ee ugu awooda badan Febraayo 2019, Sida laga soo xigtay AnTuTu
AnTuTu waxay noo keenaysaa qiimeynta 10ka taleefannada casriga ah ee ugu awoodda badan Febraayo 2019. Waan ku tusinaynaa!
Corning wuxuu ka shaqeeyaa Gorilla Glass si uu u laabo taleefannada
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan horumarinta Gorilla Glass isku laaban oo Corning ay soo saareyso, si loogu isticmaalo taleefannada isku laaban.
OPPO F11: Nooca yar ee F11 Pro
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka OPPO F11 ee sumaddu horay ugu soo bandhigtay dhacdo ka dhacday Hindiya oo dhawaan dukaammada duqeyn doonta.
OPPO F11 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan soo bandhigida OPPO F11 Pro gudaha Hindiya, taas oo mahad leh tan aan ognahay qeexitaanka buuxa ee taleefanka.
6,7 inji iyo 32 mpx oo leh kamarad saddex geesood ah ayaa ka mid ah qeexitaanada Galaxy A60
Qeexitaannada Samsung ee bartamaha soo socda, Galaxy A60, ayaa la sii daayay, terminal leh shaashad weyn iyo 3 kaamirooyinka gadaal
Shaashadda Samsung ee Galaxy S10 waa tan ugu fiican adduunka taleefanka sida uu sheegayo DisplayMate
Kadib markay marayaan gacmaha DisplayMate, shirkadan waxay sheeganeysaa in Galaxy S10 uu leeyahay shaashadda ugu fiican suuqa taleefannada.
Telefoonka Muhiimka ah wuxuu helaa Taageerada Nolosha Dijitaalka iyadoo loo marayo Cusboonaysiin
Nolosha Dijital ah waxay u gaar ahayd Pixels iyo telefoonada Android One in muddo ah, laakiin hadda waxay bilaabeen inay ku sii socdaan waddada Telefoonka Muhiimka ah.
ColorOS 6 waa dhow yahay: Oppo wuxuu ku dhawaaqi doonaa jadwalka cusbooneysiinta dhammaadka Maarso
Qorshaha casriyaynta ColorOS 6 waxaa lagu dhawaaqi doonaa dhamaadka bisha Maarso. Lakabka ayaa dhowaan u imaan doona dhowr taleefan oo shirkadda ah.
Telefoonka zoomka ee 10o ee Oppo wuxuu yeelan doonaa 2 milyan oo unug markii ugu horeysay ee la iibiyo
VP of Oppo wuxuu markale la wadaagay faahfaahin ku saabsan safarka la bilaabayo ee nooca Oppo ee aan wali la aqoon kaasoo hoy u noqon doona 10X zoom technology.
Meitu T9 wuxuu diiwaangeliyaa dhibco kamarad hore oo wanaagsan DXOMark
Meitu T9 wuxuu la yimaadaa laba kamarad xaga dambe iyo labo dhanka hore. DXOMark waxay dhalisay dareemayaalkeeda hore dhibcihiisuna wuu fiicnaa.
HTC waxay qorsheyneysaa inay shati siiso sumadeeda
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qorshayaasha shirkadda HTC inay shati u siiso astaantooda si ay uga baxaan xaaladdooda dhaqaale xumo ee mustaqbalka ka jirta Hindiya.
Hadda waad keydin kartaa Galaxy M20 gudaha Spain
Samsung Galaxy M20 ayaa dhawaan lagu wadaa in laga hirgaliyo dalka Spain waxaana durba macquul ah in si rasmi ah loogu keydiyo Amazon dhexdeeda bogagga kale.
Laga bilaabo berrito waxaad keydin kartaa Oukitel C13 Pro
Waxaan ka hadlaynay toddobaadyo dhowr ah oo ku saabsan bilaabista soo socota ee Oukitel, oo ah taleefannada casriga ah ee loogu talagalay jeebadaha ugu raqiisan. Waxaan hadleynaa…
OxygenOS 9.0.4 ayaa hadda loo heli karaa OnePlus 5 iyo 5T: markaa waad rakibi kartaa
OnePlus wuxuu bilaabay inuu cusbooneysiiyo cusbooneysiin cusub OnePlus 5 iyo OnePlus 5T dhammaadka wiigga. The…
Huawei Y7 2019: Noocyada cusub ee soo gelitaanka shirkadda
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Huawei Y7 2019, taleefanka cusub ee heerka gelitaanka ee nooca Shiinaha, horeyba si rasmi ah ayaa loo soo bandhigay.
Galaxy S10 cusub iyo Galaxy M waxay helayaan shahaado HDR iyo HD, siday u kala horreeyaan, oo laga helo Netflix
Galaxy S10-ka cusub, seddexdiisa nooc, oo ay weheliso Galaxy M, sidoo kale seddexdiisa nooc, waxay ka heleen shahaadada HDR shirkadda Netflix
Tani waa farqiga nolosha batteriga ee u dhexeeya Galaxy S10e, S10 iyo S10 +
Fiidiyow caddeeya waxyaabaha ku saabsan farqiga u dhexeeya batteriga u dhexeeya 3 nooc ee Galaxy S10. S10 + ayaa si cad u guuleysta.
Vivo V15: Kaamirada la iska celin karo iyo kamarada gadaal seddexaad leh ee bartanka udhaxeysa
Soo ogow qeexida Vivo V15, bartamaha cusub ee nooca Shiinaha oo leh kaamirada hore ee laga noqon karo iyo seddex kamaradood oo gadaal ah.
Kiisaska ugu horreeya ee loogu talagalay Galaxy Fold horeyba waa run
Raadi wax badan oo ku saabsan kiisaska ugu horreeya ee Spigen u soo bandhigtay Galaxy Fold kaas oo la sii deyn doono waqti yar, sida ay xaqiijiyeen.
La shaandheeyey qiimaha Samsung Galaxy A40
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qiimaha Galaxy A40, Samsung ee bartamaha-dhexe ee cusub uu yeelan doono marka uu dukaammo ka bilaabo waxyar ka dib.
Faahfaahin buuxda ee Hisense U30 oo leh shaashad dalool leh ayaa ka soo muuqday TENAA
Taleefanka casriga ah ee 'Hisense U30' ayaa ka soo muuqday wakaaladda TENAA oo ay weheliyaan dhammaan astaamaheeda iyo tilmaamaha farsamo.
Android Pie wuxuu ku sii dhowaanayaa OnePlus 3 iyo 3T: wuxuu ku soo socdaa taleefannadan dhowaan
OnePlus waa soo saare taleefan casri ah oo si dhakhso leh u koraya oo aasaasay xididdadiisa dhawr sano gudahood. Wuxuu bilaabay launched
Redmi Note 7 Pro ayaa laga bilaabi doonaa Shiinaha 18-ka Maarso iyada oo "layaab badan"
18-ka Maarso, Redmi Note 7 Pro ayaa lagu soo bandhigi doonaa Shiinaha iyada oo "layaab badan", sida uu sheegayo teaser-ka cusub ee agaasimaha guud ee soo saaraha Shiinaha dhawaan soo saaray.
Galaxy S10 wuxuu maraa tijaabada adkeysiga ugu caansan
Waxbadan ka ogow JerryRigEvery baaritaanka adkeysiga ee Samsung Galaxy S10 soo maray isla markaana ku gudbay midabbo duulaya.
Cusbooneysiinta cusub ee MIUI waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku qariso qariidada Xiaomi Mi 9
Xiaomi waxay soo saartay cusbooneysiin MIUI ah oo loogu talagalay Xiaomi Mi 9 iyo Mi 9 Transparent Edition. Midkani wuxuu la yimaadaa xalalka qaarkood.
Huawei Y6 2019 hadda waa rasmi: Ogow qeexitaankiisa
Soo ogow faahfaahin dheeraad ah oo dhameystiran oo ku saabsan Huawei Y6 2019, oo ah nooca cusub ee heerka gelitaanka ee nooca Shiinaha horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Blackview BV9800, casriga cusub ee rooga ah ayaa lagu soo bandhigay MWC 2019
Blackview BV9800 waxaa lagu soo bandhigay Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka ee 2019 magaalada Barcelona, ​​Spain. Ogow astaamaheeda, qiimaha iyo helitaankiisa.
Ulefone Power 6 ayaa shaaca ka qaaday nashqadeynta MWC 2019 [Video]
Intii lagu jiray MWC 2019, naqshadda Ulefone Power 6 ayaa la muujiyay, iyo sidoo kale astaamaha ugu muhiimsan iyo qeexitaankeeda.
Realme 3 Pro sidoo kale wuxuu bilaaban karaa 4-ta Maarso oo uu weheliyo Realme 3
4-ta Maarso, Realme waxay sii deyn doontaa Realme 3. Hase yeeshe, shaxan cusub oo ay soo saartay shirkaddu waxay muujineysaa in Realme 3 Pro sidoo kale laga yaabo inuu bilowdo.
Meizu Note 9 Lite wuxuu marayaa AnTuTu oo qeexitaankiisa muhiimka ah waa la muujiyay
Sawir qarsoon oo taleefan la yiraahdo Meizu Note 9 Lite ayaa soo muuqday. Daadinta ayaa shaaca ka qaadday qaar ka mid ah tilmaamaha casriga ah.
Maamulaha shirkadda Huawei ayaa sheegay in qaabka Galaxy Fold uu xun yahay, Mate X-na uu ka fiican yahay
Richard Yu, oo ah agaasimaha shirkadda Huawei, ayaa dhowaan ka hadlay qaabeynta labada moodelba oo si aan la yaab lahayn ayuu uga doorbidaa Mate X kan Galaxy Fold.
Vivo IQOO: Taleefanka ugu horreeya ee IQOO waa rasmi
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Vivo IQOO, taleefankii ugu horreeyay ee sumcadda cusub ee Shiinaha horay loogu soo bandhigay.
MIUI waxay ku dari doontaa muuqaalka Shaashadda Qufulka joogtada ah si looga hortago furayaasha aan loo baahnayn
Xiaomi waxay ku dari doontaa muuqaalka Shaashadda Qufulka joogtada ah MIUI iyadoo lagu mahadinayo talooyinka xubnaha bulshada Mi.
Galaxy S10 ayaa ku dari doona shaashadda ilaaliyaha sanduuqa
Samsung Galaxy S10 iyo S10 + waxaa ku jiri doona shaashadda ilaaliyaha sanduuqa, ilaaliyaha shaashadda ee la jaan qaadi kara dareemayaasha 'ultrasonic' ee isku xira shaashada
Xanta ayaa la xaqiijiyay: kamaradda Samsung Galaxy A90 runtii waxay noqon doontaa wax lala yaabo
Tani waa markii ugu horreysay ee aan ka hadlayno Samsung Galaxy A90, xubinta xigta ee jiilka cusub ee Galaxy ...
Soo hel liiska taleefannada Asus ee heli doona cusbooneysiinta Android Pie sannadkan oo dhan, oo ay xaqiijisay shirkadda.
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Motorola ee ah inay soo saarto taleefan la laaban karo sida lagu xaqiijiyay dhacdo toddobaadkan dhacday.
Sida loo rakibo EMUI 9 ee Huawei Mate 9: lakabka ayaa ugu dambeyntii gaadhay moodooyinkan
Huawei wuxuu si rasmi ah u sii daayay EMUI 9 Lakabka shakhsi ahaaneed ee loogu talagalay 9 Mate 2016 taxanaha taleefanka.
Lenovo Z6 Pro wuxuu noqon doonaa shirkadda 5G ee shirkadda waxayna yeelan doontaa kamarad HyperVision ah
Lenovo Z6 Pro wuxuu la imaan doonaa taageero shabakadaha 5G iyo kamarad Hyper Vision qaabeynteeda. Waxay noqon doontaa calanka xiga ee shirkadda.
Ka faa'iideyso MWC 2019 si aad ugu iibsato telefoonno heer sare ah oo qiimo dhimis weyn leh
Isku-darka aaladaha ugu fiican ee aad ka heli karto haddii aad raadineyso inaad iibsato telefoonno heer sare ah oo qiimo jaban ku leh Amazon.
44W Super FlashCharge tiknoolajiyada lacag bixinta ayaa ka qaadi doonta taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'iQOO smartphone' ilaa 50% kaliya 16 daqiiqo
Taleefanka casriga ah ee loo yaqaan 'iQOO smartphone', oo la iman doona taageerada 44W tikniyoolajiyadda 'Super FlashCharge', ayaa lagu soo oogi karaa illaa 50% kaliya 16 daqiiqo.
Kuwani waa waraaqaha ugu xiisaha badan ee aad ku lahaan karto Samsung Galaxy S10 iyo S10 +
Ma rabtaa inaad iibsato Samsung Galaxy S10 ama Samsung Galaxy S10 +? Ha iloobin inaad kala soo baxdo sawir-qaadayaashan cajiibka ah si aad u siiso taabasho u gaar ah.
Ugu dambeyntiina Apple Music ma gaari doonto Hoyga Google, qaladkeeda oo dhan ayaa khalad lahaa
Ugu dambeyntiina waxay u muuqataa in suurtagalnimada bilaabista Apple Music ee Google Home ay sabab u ahayd cilad ku timid arjiga.
Samsung Galaxy A10 hadda waa rasmi: Infinity-V iyo qiimo qaali ah
Ugu dambeyntiina, Samsung waxay soo bandhigtay Samsung Galaxy A10, oo ah taleefan cusub oo heer-gal ah oo laga helo soo-saaraha oo leh qiime aad u xiiso badan.
Tani waxay noqon doontaa naqshad rasmi ah ee Huawei P30 iyo Huawei P30 Pro
Sawirada saxaafadda ee Huawei P30 iyo Huawei P30 Pro ayaa la daadiyay iyagoo xaqiijinaya sida qalabka Huawei ee muddada dheer la sugayay u ekaan doono
Redmi Note 7 Pro ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Soo ogow qeexitaannada, qiimaha iyo bilaabista Redmi Note 7 Pro oo horeyba loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Hindiya.
Ma jiri doono telefoon isku laaban oo ka yimaada OnePlus: kuwani waa sababaha
OnePlus ayaa sharraxay sababaha ugu waaweyn ee shirkaddu u furi doonin taleefan isku laaban, ugu yaraan muddada gaaban.
Sharaf in la soo saaro taleefan casri ah oo la laaban karo sannadka 2020
Raadi wax badan oo ku saabsan qorshooyinka Maamuusta ee ah inay keensato taleefankeeda ugu horreeya ee la laaban karo suuqa, wax aan dhici doonin illaa sanadka dambe.
Galaxy M30: Saamiga dhexe ee Samsung ayaa la dhammaystiray
Raadi wax badan oo ku saabsan Samsung Galaxy M30, oo ah taleefanka casriga ah ee dhexdhexaadka ah ee shirkadda Kuuriya si rasmi ah loo soo bandhigay.
Wax ka beddel One UI Tuner barta xaaladda, dejimaha degdegga ah iyo in ka badan oo ku saabsan Samsung Galaxy oo leh 'Android Pie'
Hal UI Tuner waxaad si qoto dheer ugu habeyn kartaa Samsung Galaxy-ga lagu cusbooneysiiyey Android Pie. App ka yimaada XDA.
Doogee S90 casriga casriga ah ee casriga ah ee 5G tiknoolajiyadeed ayaa looga dhawaaqay MWC 2019
At Mobile World Congress (MWC) 2019, sumcadda Shiinaha ee Doogee waxay ku soo bandhigtay taleefankeeda 5G, 'Doogee S90', albaabbada xiran.
OnePlus 7 wuu sii socon doonaa iyada oo aan lagu sharraxin nidaamka lacag la'aanta ah
Ku-dallaca wireless-ka ee OnePlus wuxuu sii wadi doonaa inuu noqdo riyo dhammaan isticmaaleyaasha aaminay soo-saarahaan, maaddaama OnePlus 7 uusan midkoodna dhexgeli doonin.
Xiaomi Black Shark Skywalker waa la caddeeyay oo sawir ayaa ka daadanaya naqshadiisa
Xiaomi Black Shark 2 wuxuu helay shahaadada 3C ee Shiinaha. Xanta qaar ayaa sheeganeysa inay ku dhici karto suuqa sida Black Shark Skywalker.
Waxaa jira calaamado muujinaya in Huawei uu ku bilaabi karo P30 Pro muraayadaha indhashareerka oo u oggolaanaya aaladda inay ku guuleysato sawirro wanaagsan oo leh 10X zoom.
Xiaomi Mi MIX 3 5G: Tilmaamaha, qiimaha iyo bilaabista. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka nooca 5G ee taleefanka.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan safafka taleefanka ee OUKITEL ay si rasmi ah ugu soo bandhigtay MWC 2019 isla markaana ay garaaci doonto dukaamada dhawaan.
Ka ogow wax badan oo ku saabsan TCL iyo Alcatel noocyada taleefannada casriga ah ee horay loo soo arkay MWC 2019 ee Barcelona.
Shirkadda sameeyaha caalamiga ah ee Swatch ayaa dacwad ka gudbisay Samsung, waxay ku andacooneysaa, inay koobiyeynayso dilallada saacadaha ugu caansan qaarkood.
Samsung Galaxy A10 2019, taleefanka cusub ee raqiiska ah ee Samsung, ayaa ka muuqda goobta kahor soo bandhigidiisa
Sawiradii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taleefanka cusub ee raqiiska ah ee Samsung ayaa la dusiyay. Waxaan ka hadleynaa Samsung Galaxy A10 2019 oo berri la soo bandhigi karo.
Waxaad ku iibsan kartaa HTC Exodus lacag dhab ah
Raadi wax badan oo ku saabsan isbeddelka HTC ee istiraatiijiyadda kuu oggolaanaya inaad ku iibsato qaabkeeda Baxniintii lacag dhab ah laga bilaabo Maarso.
Lacagta degdegga ah ee 55W waxay noqon doontaa oo keliya Huawei Mate X
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan lacagta 55W ee Huawei ee degdegga ah, taas oo xilligan ku sii jiri doonta oo keliya Huawei Mate X oo ay xaqiijisay astaanta.
Samsung waxay sharraxeysaa sababta Samsung Galaxy Fold aan loogu tijaabin karin dukaamada
Samsung waxay xaqiijisay in Samsung Galaxy Fold uu ku jiri doono dukaamada qaar, laakiin sinaba uma muuqan doono. Maxaad u gaadhaysaa go'aankan?
Ciyaar +: Tiknoolajiyadda cusub ee kor u qaadaysa waxqabadka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan ciyaaraha + tiknoolajiyada cusub ee Sharafta ay soo bandhigtay si loo hagaajiyo waxqabadka processor-ka markii la ciyaarayo.
Sawiradan dhabta ah waxay xaqiijinayaan naqshadeynta Meizu M16S Plus
Sawiradii ugu horreeyay ee aaladda ayaa la daadiyay, taasoo xaqiijineysa nashqadda Meizu M16S Plus oo u taagan muuqaallada ugu yar iyo shaashadda weyn.
Huawei ma aqbali doonto inay ka hirgeliso "albaabada dambe" shabakadaha isgaarsiinta Shiinaha
Huawei wuxuu Canada ku qabtay dhacdo saxaafadeed usbuucii la soo dhaafay halkaas oo madaxweynaheeda uu isku dayay inuu yareeyo cabsida la xiriirta tiknoolajiyadeeda 5G.
Xiaomi Mi 8 SE wuxuu ku helaa qaabka Super Night Scene iyadoo loo marayo cusbooneysiin
Xiaomi Mi 8 SE bartamaha-dhexe wuxuu helay cusbooneysiin cusub oo OTA ah oo la socota qaabka kamaradda Super Night Scene.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan heshiiskan in Xiaomi uu ku xiray Light, oo mas'uul ka ah hagaajinta kamaradaha Nokia 9 PureView.
Android Pie ayaa loo sii daayay Nokia 3.1 Plus
Agaasimaha HMD Global Product ayaa ku dhawaaqay in cusbooneysiinta Android Pie ay horeyba ugu sii socotey Nokia 3.1 Plus.
Galaxy S10 wuxuu ka qaadaa iPhone XS mid ka dhaqso badan kan wax ku xardha Apple
Ayaa dhihi lahaa, laakiin Galaxy S10 ayaa iPhone XS lagu soo oogi karaa si ka dhakhso badan kan xeedho u gaar ah. Waxay muujineysaa daciifnimada iPhone ee eedeymaha.
Shaandheeyey astaamaha ugu horreeya ee Samsung Galaxy Note 10 ee xaqiijinaya qayb ka mid ah qeexitaankiisa
Jaangooyooyinkii ugu horreeyay ee Samsung Galaxy Note 10 ayaa la soo daadiyay, halkaas oo aan ku xaqiijin karno isku xirnaantiisa 5G, marka lagu daro RAM iyo processor-ka phablet.
Nooca casriga ah ee '5G smartphone' ee Sony ee lagu soo bandhigayo MWC 2019
Terminal cusub oo tijaabo ah oo 5G ah oo Sony ah ayaa lagu soo bandhigay Mobile World Congress 2019, oo ku taal magaalada Barcelona, ​​ee taagan Sony iyo Qualcomm.
Energizer wuxuu kadis ku yahay MWC 2019 oo leh taleefan isku laab laab dhab ah oo jaban
Soo saaraha Mareykanka ayaa la yaabay soo bandhigida Tamarta Awoodda Max Max P8100S, oo ah taleefan isku laaban oo aad u jaban: kuwani waa astaamaheeda.
LG V50 5G: LG-kiisii ​​ugu horreeyay ee 5G ee fiidiyowga ah
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka LG V50 5G, dhammaadka sare ee sumadda Kuuriya oo leh 5G oo lagu soo bandhigay MWC 2019.
Is waafajinta la filayo ee Pocophone-ka iyo adeegga HD ee qulqulka adeegyada fiidiyowga ayaa ku soo dhowaanaya qaabka cusbooneysiinta OTA
Samsung Galaxy S10 cusub ayaa hadda rasmi ah. Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan qeexitaannada, qiimaha iyo helitaanka, markaa waan ku tusi doonnaa adiga.
Soo ogow qeexitaannada buuxa ee Sony Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus, casriga cusub ee shaashadda cusub ee Sony oo lagu soo bandhigay MWC 2019.
Soo ogow faahfaahinta buuxda ee Sony Xperia 1, dhammaadka-cusub ee sare ee Sony oo si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019.
Raadi wax badan oo ku saabsan daahfurka Nokia 9 PureView ee Isbaanishka, hadda iyadoo qiimaha iyo taariikhda la siidaayo taleefanka la ogyahay.
Wiko View3 iyo View3 Pro: Kaamirada seddexaad ee aagga dhexe
Soo ogow wax walba oo ku saabsan Wiko View3 iyo View3 Pro, nooca dhexe ee cusub ee rasmiga ah ee si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019 ee magaalada Barcelona.
Faahfaahinta koowaad ee kamaradda Samsung Galaxy Note 10, oo ujeedkeedu aad u sarreeyo
Waxaan horeyba uheysanay macluumaadka ugu horeeya xubinta xigta ee Qoyska Xusuusta ee soo saaraha Kuuriya: Kaamirada Samsung Galaxy Note 10 dhibcaha runtii aad ayey u sarreeyaan.
OUKITEL C12 ayaa timid, qiimaha ugu hooseeya ee ugu hooseeya suuqa
OUKITEL C12 ayaa timid, fikrad cusub oo ah taleefanka casriga ah ee qiimaha jaban oo leh shaashad 6,18 "oo leh shaashad, laba kamaradood, akhristaha sawirka faraha iyo 3300 mAh
Nubia Alpha: Waa taleefan casri ah oo la laaban karo oo lagu xidho curcurka
Ka ogow wax badan oo ku saabsan Nubia Alpha, aaladda calaamadaha cusub ee isku laaban, taas oo ah isku dhafka u dhexeeya saacad iyo taleefan casri ah oo lagu soo bandhigay MWC 2019.
Ka faa'iideyso dalabkan oo ku soo iibso Ulefone Armor 5 kaliya 155 euro
Haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso taleefankaaga casriga ah oo aad raadineyso moodel jiingad leh, waxay u badan tahay dalabkan uu TomTop noo soo bandhigo inuu adiga xiiso kuu qabo
Fiidiyowga: tani waa sida ciyaarta King of Glory ay ku socoto Huawei Mate X
Huawei waxay la wadaagtay fiidiyowga Mate X iyada oo loo adeegsanayo King of Glory, ciyaarta caanka ah ee Tencent, oo ka socota shaashadda.
Samsung Galaxy A30, khadka dhexe ee cusub ee Koonfurta Kuuriya waa rasmi
Waxaan horeyba kaagala hadalnay Samsung Galaxy A50 dhawaan. Hadda waxaan ku sameyn doonnaa Galaxy A30, oo ah kan ka yar kan ugu horreeya ...
Tartan loogu jiro taleefannada casriga ah ee laabma ayaa durba bilaabmay. Samsung iyo Huawei waxay soo saareen laba nooc oo kala duwan laakiin isku shaqo ah: shaashad isku laaban
Galaxy A50: Samsung-dhex-dhexaad cusub
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qeexitaanka Galaxy A50, Samsung ee bartamaha-dhexe ee cusub oo horey si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019.
ZTE Axon 10 Pro: Taleefanka ugu horreeya ee sumadda leh 5G
Raadi wax badan oo ku saabsan qeexitaanka ZTE Axon 10 Pro, taleefankii ugu horreeyay ee 5G ee ZTE ku soo bandhigtay MWC 2019.
Waxay u badan tahay in moodooyinka soo socda ee Galaxy S, uusan noqon doonin S11, maaddaama shirkaddu ay baraneyso magac beddelka magac-bixinta.
Raadi wax badan oo ku saabsan saddexda taleefan ee cusub ee Alcatel si rasmi ah ugu soo bandhigay MWC 2019 oo qeexitaankoodu rasmi yahay.
ASUS waxay soo bandhigi doontaa jiilka xiga ee loo yaqaan 'Zenfone model' oo loo yaqaan 'Asus Zenfone 6' bisha May 14keeda magaalada Valencia, Spain.
Oppo T1, astaan ​​la awoodi karo oo leh Snapdragon 855 ayaa soo socota
Waxay u egtahay in Oppo ay ku dhawaaqi karto khad cusub oo casri ah. Sawir taleefan soo socda oo la yiraahdo "Oppo ...
Qiimaha Xiaomi Mi 9 fadeexad
Waa durbaba rasmi, qiimaha Xiaomi MI 9 aad ayuu uga hooseeyaa intii la filaayay, mana ahan oo kaliya inay ku kacayso € 449 kor u qaadista, tani waa qiimaha nooca 6/64 GB
LG G8 ThinQ: Dhamaadka dhamaadka sare ee sumadda Kuuriya
Ka ogow wax dheeraad ah oo ku saabsan LG G8 ThinQ, dhammaadka-dhamaadka sare ee sumadda Kuuriya oo qeexitaankiisa lagu soo bandhigay MWC 2019.
TCL waxay muujineysaa taleefannada casriga ah ee la laaban karo oo leh DragonHinge iyo kamaradaha kala duwan ee MWC 2019
TCL waxay ku soo bandhigtay dhowr nooc noocyada taleefannada casriga ah ee isku laaban taleefannada Mobile World Congress ee magaalada Barcelona, ​​Spain.
Nokia waxay ku soo bandhigeysaa noocyadeeda kala duwan ee taleefannada MWC 2019
Ka ogow wax badan oo ku saabsan noocyada cusub ee casriga ah ee Nokia ay si rasmi ah ugu soo bandhigtay MWC 2019 magaalada Barcelona munaasabaddeeda.
Nokia 9 PureView: Taleefanka casriga ah oo wata shan kamaradood oo gadaal ah ayaa rasmi ah
Raadi wax badan oo ku saabsan Nokia 9 PureView iyo qeexitaankiisa, oo si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019 ee magaalada Barcelona.
Faahfaahin dheeraad ah ka hel faahfaahinta Huawei Mate X, taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee isku laabma ee Huawei ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay MWC 2019.
Maanta Febraayo 24, 2019, calaamadda MWC19, Huawei waxay soo bandhigeysaa qaar ka mid ah alaabteeda ugu hal abuurka badan, kuwaas oo ka mid ah Huawei Mate X cusub oo la filayo, kaas oo noqon doona terminal ugu horreeya ee maraca asal ahaan Shiinaha leh shaashad isku laaban ama shaashad jilicsan
Telefoonka casriga ee isku laaban ee Huawei waxaa loo yaqaan Mate X [Poster]
Huawei wuxuu ku dhawaaqi doonaa taleefankiisa casriga ah ee la isku laaban karo maalmo yar ka dib Shirka Caalamiga ah ee Mobile-ka ee 2019 ee Barcelona, ​​Spain. Waxaa loo sii deyn doonaa sida Mate X.
Shaandhaynta qayb ka mid ah astaamaha Huawei P30 Lite
Qaar ka mid ah astaamaha Huawei P30 Lite ayaa lagu daadiyay iyada oo loo marayo TENNA, iyadoo la xaqiijinayo cabirka shaashadda, batteriga iyo cabirka.
Wax walba oo aan ka sugeyno Sony ee MWC 2019
Waxaan si faahfaahsan u sharaxeynaa wax kasta oo aan ka rajeyneyno Sony ee loogu talagalay Shirka Caalamiga ah ee Moobaylka 2019 ee Barcelona, ​​Spain Soo ogow waxa shirkadda Japan ay noo hayso!
Hadda waad soo dejisan kartaa waraaqaha sawirka ee Xiaomi Mi 9
Hadda waad soo dejisan kartaa shaashadda shaashadda ee 'Xiaomi Mi 9' si aad awood ugu yeelatid taleefankaaga muuqaal muuqaal u dhigma kan Xiaomi flagship.
Xiaomi Mi Max 3 iyo Mi 8 Lite ayaa cusbooneysiinaya Android Pie
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta xasilloonida ee 'Android Pie' oo horeyba ugu soo socota Xiaomi Mi 8 Lite iyo Xiaomi Mi Max 3 saacadahaas.
Qiimaha Xiaomi Mi 9 ee Spain horeyba waa rasmi
Raadi wax badan oo ku saabsan qiimaha bilowga ee Xiaomi Mi 9 uu ku imaan doono Isbayn sida lagu arkay bogga shirkadda.
Raadi wax badan oo ku saabsan nooca taleefannada casriga ah ee aan ognahay inaan awood u yeelan doonno inaan si rasmi ah ugu aragno MWC 2019 ee bilaabmaya berri.
The Realme 3 waxaa si rasmi ah looga dhawaaqi doonaa bisha soo socota ee Maarso 4 India. Tani waxaa lagu xaqiijiyay shirkadda iyada oo loo marayo boosta rasmiga ah.
Shirkadda Huawei waxay ka furaysaa dukaankeedii ugu horreeyay ee ka baxsan Shiinaha magaalada Vienna, Austria
Soo saaraha Shiinaha wuxuu la imaan doonaa dukaan qadka ka baxsan magaalada Vienna, Austria, xagaaga sanadkaan. Waxay noqon doontaa tii ugu horreysay ee nooceeda ah ee ka dhacda Shiinaha.
OnePlus wuxuu bilaabi doonaa moobilkiisa 5G rubuca labaad
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha summaddu inay mobilada ugu furaan 5G rubuca labaad ee sanadkan.
Donald Trump wuxuu doonayaa in Mareykanku hormuud u noqdo shabakadda 6G wuxuuna ku boorinayaa shirkadaha inay sidaas sameeyaan
Donald Trum wuxuu doonayaa in dhowaan la soo saaro 6G gudaha dalka. Maskaxda ku hay in shabakada 5G kaliya la tijaabinayo.
Samsung ayaa xaqiijisay: haddii aad leedahay Galaxy oo leh hal UI waad khariidayn kartaa badhanka Bixby
Taasi waa, qof kasta oo cusbooneysiiya Android Pie wuxuu awood u yeelan doonaa inuu khariiddo badhanka Bixby si uu u isticmaalo barnaamij kasta oo leh badhankaas aan la adeegsan.
Meizu Note 9 wuxuu diiwaangeliyaa in kabadan 175k gudaha AnTuTu mahadnaqa Snapdragon 675 iyo 6 GB ee RAM
Barxadda 'AnTuTu benchmarking platform', Meizu Note 9 oo ah bartamaha dhexe ayaa duubtay dhibco dhan 175,987.
Sony Xperia XZ4 ayaa mar kale la sii daayay kahor intaan la bilaabin, laakiin "Xperia 1"
Sony Xperia XZ4, oo ah taleefanka soo socda ee shirkadda Japan laga leeyahay, ayaa mar kale soo muuqday, laakiin ku hoos jira naanaysta "Xperia 1".
Nokia 6 (2017) wuxuu bilaabaa inuu helo Android Pie casriyeyntiisii ​​ugu dambeysay
HMD Global wuxuu bilaabay inuu soo saaro casriyeyntii ugu dambeysay ee loo yaqaan 'Android 9 Pie' ee loogu talagalay Nokia 6, oo ah midka dhexe ee la sii daayay 2017.
Shaashadaha Samsung Galaxy S10, ayaa ka fiican iyada oo aan "lahayn"
Qoyska cusub ee Samsung Galaxy S10 waxay taariikhda ku gali doonaan waxyaabo badan, waxaana ka mid ah iyaga oo xukun dil ah ku xukumay.
Iibinta taleefannada gacanta ayaa hoos u dhacay 2018, laakiin shirkadda Huawei ayaa kor u kacday 37%
Ka ogow kororka iibka shirkadda Huawei ee suuqyada caalamiga sanadkii la soo dhaafay, kaasoo ahaa kii ugu weynaa adduunka.
Sawirada rasmiga ah ee Nokia 9 Pureview ayaa la kashifay kahor intaan la bilaabin
Kahor intaan Nokia 9 Pureview laga bilaabin MWC 2019, sawirradeeda rasmiga ah ee saxaafadda ayaa ka soo muuqday webka.
Faahfaahinta aad seegtay ee ku saabsan Galaxy S10: nabad gelyada ogeysiisyada LED, khariidaynta Bixby iyo inbadan
Galaxy S10 waa taleefanno cajiib ah, laakiin hubaal haddii aad taqaan faahfaahin qaar, waxaad heli kartaa hoos u dhac wanaagsan.
Farqiga u dhexeeya Samsung Galaxy S10 iyo Samsung Galaxy S9, ma mudan tahay in wax laga beddelo?
Samsung Galaxy S10 ama Samsung Galaxy S9? Hal-abuurnimadu ma ku filan tahay in lagu bixiyo 400 oo euro oo dheeraad ah? Waxaan ku tusaynaa khilaafaadkooda ugu waaweyn.
Samsung waxay iibisay 2 bilyan oo taleefannada casriga ah ee Galaxy ah muddo ku dhow toban sano
DJ Koh ayaa shaaca ka qaaday in Samsung ay iibisay tiro aad u tiro badan oo ah taleefannada casriga ah ee Galaxy tan iyo markii ugu horreysay ee moodellada ay ka baxeen warshaddii 2010.
Oukitel C15 Pro ayaa suuqa ku garaaci doona Android 9 Pie iyo 5G oo iswaafajin kara
Xanta ugu dambeysay ee la xiriirta shirkadda Oukitel waxay soo jeedineysaa in C15 Pro uu suuqa ku dhufan doono Android 9 Pie
Rasmi: Meizu Note 9 wuxuu imaan doonaa 6-da Maarso qaab ahaan!
Maanta, Meizu wuxuu ku xaqiijiyey, iyada oo loo marayo koontadiisa Weibo, in bartamihiisa soo socota, Meizu Note 9, si rasmi ah loo sameyn doono 6da Maarso.
Oppo F11 Pro wuxuu ka muuqdaa fiidiyow gacmeed wuxuuna muujinayaa naqshadiisa dhabta ah
Fiidiyow gacmeed oo loo yaqaan 'Oppo F11 Pro' ayaa u muuqday inuu muujinayo muuqaalkiisa dhabta ah. Kameradda gadaal laba-geesoodka ah iyo faahfaahinta kale waa la qiimeyn karaa.
HMD Global waxay soo saartay Android 9 Pie (Go Edition) Nokia 2.1
HMD Global ayaa ku dhawaaqday daahfurka Android 9 Pie (Go Edition) ee Nokia 2.1, oo ah mid ka mid ah boosteejooyinka ugu awooda badan shirkadda.
Samsung Galaxy A horeyba waxay u laheyd taariikh soo bandhigid ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan taariikhda soo-bandhigga ee Samsung Galaxy A, oo ah bartamaha-cusub ee astaamaha Kuuriya, oo la soo bandhigo Febraayo 28.
UMIDIGI S3 PRO: Calan cusub oo sumadda ah oo aad ku qaadan karto raaf
Ka raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan calaamaddan UMIDIGI S3 Pro oo aad ka iibsan karto Indiegogo oo aad si bilaash ah uga heli karto lacag bixinta internetka.
LG Q60: Dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh kamarad gadaal saddex laab ah
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan qeexitaanka LG Q60, nooca casriga ah ee nooca dhexe ee dhexdhexaadka ah oo la socda kamarad gadaal saddex-laab ah
Vivo V15 Pro: Taleefan casri ah oo casri ah oo leh kamarad dib looga noqon karo
Raadi wax walba oo ku saabsan Vivo V15 Pro, oo ah bartamaha cusub ee noocyada Shiinaha ee leh kamarad lagalaaban karo horayna loo soo bandhigay.
DXOMark wuxuu muujinayaa dhibcaha kamaradda ee Xiaomi Mi 9: waa mid aad u sarreeya!
DXOMark ayaa shaaca ka qaaday dhibcaha kaamerada ee Xiaomi Mi 9, iyagoo soo bandhigaya awooddiisa sawir ee cajiibka ah. Baro iyaga!
Sawirka dhabta ah ee OnePlus 7 wuu daadanayaa wuxuuna muujinayaa naqshadeynta kaamirada pop-up-ka ah
Sawir cusub oo hadda soo ifbaxay wuxuu muujinayaa in calaamadda 'OnePlus 7' ay la imaan doonto shaashad aan qaan-gaar ahayn, si loo qalabeeyo kamarad pop-up ah.
Xiaomi waxay ku dhawaaqeysaa seddex xeedho oo wireless ah: desktop, baabuur iyo 10.000 mAh powerbank
Marka lagu daro taxanaha cusub ee Xiaomi ee loo yaqaan 'Mi 9', shirkadda Shiinaha ayaa sidoo kale shalay soo bandhigtay seddex aaladood oo fiilooyin wireless ah. Waan kuu soo bandhigeynaa!
Galaxy S8 wuxuu bilaabaa cusbooneysiinta Android Pie ee Yurub
Ka ogow wax badan oo ku saabsan cusbooneysiinta 'Android Pie' oo ku bilaabmaya inuu ku yimaado qaab deggan Galaxy S8 waddamada Yurub qaarkood.
Sidan ayaa ah sameecadaha dhagaha ee Samsung Buds Galaxy Buds
Waxaan ogaanay Samsung Galaxy Buds, sameecadaha dhagaha leh oo leh astaamo kufilan si ugu dambeyntii looga takhaluso AirPod-yada Apple.
Samsung waxay soo bandhigtay maxay yihiin labadiisa dhar ee cusub, Galaxy Watch Acitve iyo Galaxy Fit. Laba dhar oo loo xirto baahiyo kala duwan.
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy Fold, Samsung ee taleefanka casriga ah ee isku laaban. Qeexitaankiisa rasmiga ah, astaamaha, qiimaha iyo sii deynta.
LG K40 iyo LG K50: Nooc cusub oo dhex-dhexaad hoose ah oo leh ilaalin milatari
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan moodooyinka cusub ee dhexdhexaadka ah ee LG, LG K40 iyo LG K50 oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay.
Xiaomi Mi 9 Edition Transparent: Qaabka 12 GB oo RAM ah
Soo ogow dhammaan tilmaamaha Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, marka lagu daro taariikhda la sii deynayo iyo qiimaha ay lahaan doonto.
Sida loo raaco soo bandhigida Galaxy S10 iyo Galaxy Fold
Soo ogow sida aan toos ugula socon karno soo bandhigida Samsung Galaxy S10 iyo Galaxy Fold, oo ah nooca casriga ah ee isku laaban.
Soo ogow qeexitaannada buuxa ee Xiaomi Mi 9 SE, qadarka dhexe ee dhexdhexaadka ah ee nooca Shiinaha horay loogu soo bandhigay si rasmi ah.
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Xiaomi Mi 9, dhammaadka sare ee cusub ee nooca Shiinaha ee maanta si rasmi ah loo soo bandhigay.
ARCHOS waxay soo bandhigaysaa Oxygen-ka 57, 63 iyo 68 XL kahor MWC
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee ARCHOS Oxygen 57, 63 iyo 68 XL, dhamaadka-dhamaadka-cusub ee astaanta Faransiiska kahor MWC 2019.
Vivo U1: Nooca cusub ee batteriga laga soo galo
Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan qeexitaanka Vivo U1, casriga casriga heerka cusub ee laga soo iibsado nooca Shiinaha ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay.
Mobilka Samsung ee isku laaban waxaa loogu yeeri doonaa Galaxy Fold
Raadi wax badan oo ku saabsan magaca uu taleefanka isku laaban ee Samsung yeelan doono, kaas oo aakhirkii la xaqiijiyay inuu yahay Laab Galaxy ah.
Daabacadda hufan ee Xiaomi Mi 9 ayaa ka muuqata Geekbench oo leh 12 GB oo RAM ah
Kala duwanaanta hufan ee Xiaomi Mi 9 ayaa lagu diiwaangeliyey keydka Geekbench oo leh 12 GB oo RAM ah iyo waxyaabo kale oo yar oo faahfaahin ah.
Sony waxay kugu martiqaadeysaa inaad "aragti cusub qaadato" dhacdadeeda MWC 2019 ee Febraayo 25
Sony ayaa soo saartay fiidiyow cusub oo muujinaya shaashadeeda cusub ee 21: 9 oo ka muuqan doonta taleefannadooda soo socda, sida Xperia 10 iyo Xperia 10 Plus.
Ogeysiiska rasmiga ah ee Samsung Galaxy S10 waa la shaaciyay, iyadoo la xaqiijinayo inta badan sirtiisa
Ogeysiiska rasmiga ah ee Samsung Galaxy S10 ayaa la daadiyay halkaas oo aan ku arki karno hantida weyn ee calanka soo socda ee shirkadda Kuuriya.
Tani waxay noqon doontaa Motorola's Moto Mod 5G: waxay ka muuqatay FCC
5G Moto Mod ayaa ka soo muuqday FCC. Faahfaahinteeda kaladuwan waxaa laga helay liiskii ugu dambeeyay ee wakaaladda shahaadada Mareykanka.
Aaway xaddiga cabbirka shaashadda casriga ah?
Intee in le'eg ayuu qiyaasta shaashadaha taleefannada casriga ahi tagi doonaa? Telefoonada laabma ayaa xal u noqon kara koritaanka aan la joojin karin ee inji
Huawei P30 waxaa lagu soo bandhigi doonaa 26-ka Maarso magaalada Paris
Soo saaraha Aasiya ee Hauwei ayaa si rasmi ah u shaaciyay taariikhda rasmiga ah ee la soo bandhigayo ee Huawei P30, oo noqon doonta 26-ka Maarso magaalada Paris.
Xiaomi ayaa ku sharraxaysa Kaaliyaha Google waxayna siisaa Mi 9 badhan gaar ah oo si toos ah loogu helo kaaliyaha codka ee ugu caansan suuqa.
Raadi wax badan oo ku saabsan wararka aan ka filan karno Huawei ee MWC 2019, oo bilaaban doona wax ka yar toddobaad.
Waxbadan ka ogow casriga casriga cusub ee ARCHOS oo si rasmi ah loo soo bandhigay lagana arki doono MWC 2019 sidoo kale.
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan guusha uu Xiaomi Mi 9 ku haysto boos celis gudaha Shiinaha halkaas oo uu ku qabsanayo dadka isticmaala suuqa.
LG ma soo saari doonto taleefan casri ah oo isku laaban xilligan
Ka ogow wax badan oo ku saabsan qorshayaasha LG taleefankiisa casriga ah ee la laaban karo, kaas oo ay tahay inuu in muddo sugo inta laga sii deynayo dukaamada.
Rasmi: Xiaomi ayaa sharad ku gali doonta hirgelinta akhristayaasha shaashadda shaashadda bartamaha-sannadkaan
Wang Teng Thomas wuxuu ku dhawaaqay in hadafkiisa 2019 uu yahay inuu keeno "shaashadda shaashadda" waxqabadka moodooyinka dhexe ee Xiaomi.
Telefoonada taxanaha ah ee cusub ee Samsung ee Samsung ayaa imanaya laga bilaabo Maarso
Samsung, oo ah shirkadda South Korea, ayaa soo bandhigi doonta taxane cusub oo casri ah Galaxy A bisha Maarso ee sanadkan.
Qurxinta, khafiifinta iyo waxyaabo kale oo badan ayaa ah astaamaha cusub ee kamaradda ee uu keeni doono Xiaomi Mi 9
Lin Bin, oo ah aasaasaha iyo madaxweynaha shirkadda Xiaomi, ayaa dhawaan xaqiijiyay in Mi 9 uu ku imaan doono aalado cusub oo kamarad ah.
Taleefanka casriga ah ee ZTE ee 5G si uu u soo baxo Febraayo 25: wuxuu ahaan lahaa Axon 10 Pro
Shirkadda ZTE ayaa soo bandhigi doonta taleefankeedii ugu horreeyay ee 5G 25-ta bisha Febraayo iyadoo lagu qaban doono xarunta loo yaqaan 'Mobile World Congress' ee magaalada Barcelona, ​​Spain Waxay noqon kartaa Axon 10 Pro.
Waxaa la xaqiijiyay in Galaxy A50 uu yeelan doono aaladda sawirka faraha ee shaashada hoosteeda
Dareerkii ugu dambeeyay ee la xiriiray Galaxy A50 wuxuu ina tusayaa sida terminalkan cusub uu u yeelan doono aaladda sawirka shaashada shaashadda hoosteeda.
OUKITEL C13 Pro: Nooca casriga ah ee casriga ah
Ka ogow wax badan oo ku saabsan OUKITEL C13 Pro, taleefanka casriga ee cusub oo si rasmi ah loo bilaabi doono bisha Maarso ee dukaamada.
Xiaomi Mi 9 wuxuu ka muuqdaa astaamaha 'Master Lu benchmark' oo leh 12 GB oo RAM ah
Master Lu, oo ah barxad laga sameeyay Shiinaha, ayaa la wadaagay dhibcaha waxqabadka Xiaomi Mi 9 iyada oo loo marayo koontadeeda Weibo.
Google Duo waxaa lagu dhex dari doonaa OxygenOS ee OnePlus
Barta fariinta ee Google, Google Duo, ayaa lagu dhex dari doonaa lakabka shakhsi ahaaneed ee OnePlus
Samsung ayaa ka furaysa saddex dukaan oo cusub dalka Mareykanka
Samsung waxay ka fureysaa seddex dukaan oo cusub dalka Mareykanka, dukaamada halkaas oo dadka isticmaala ay isku dayi karaan dhamaan wax soo saarka shirkada ka hor inta aysan iibsan.
Daadad badan oo ku saabsan Huawei P30 iyo P30 Pro ee soo socda
Daadad badan oo ku saabsan Huawei P30 iyo P30 Pro, qaar baa u yimid inay diidaan macluumaadka kuwa kalena waxay noo sheegaan processor-ka iyo kamaradaha
Sawirka dhabta ah ee Xiaomi Mi 9 sanduuqa ayaa faahfaahinaya qeexitaankiisa muhiimka ah wuxuuna xaqiijinayaa naqshadiisa hore
Xiaomi Mi 9 waxaa loo qorsheeyay inuu rasmi noqdo Febraayo 20. Sawir toos ah oo ay weheliso sanduuqa tafaariiqda ayaa dhowaan soo muuqday.
Bixinta LG V50 ThinQ 5G waxay muujineysaa dhammaan muuqaalkeeda: taariikhda bilawga suurtagalka ah ayaa sidoo kale la muujiyay
LG waxay isu diyaarineysaa inay soo bandhigto V50 ThinQ 5G maalmaha soo socda. Soo bandhigiddeeda ayaa la soo baxday iyada iyo taariikhda saxda ah iyo waqtiga rasmiga ah.
Samsung waxay ka faa'iideysan doontaa dhibaatada 5G ee Huawei ay marayso
Samsung waxay ka shaqeyneysaa inay bixiso nidaamyo shabakadeed si loogu tijaabiyo tikniyoolajiyadda 5G ee soo socota ee dalal dhowr ah. Shirkadda ayaa beddeleysa shirkadda Huawei.
Xiaomi waxay bilaabi laheyd taleefan casri ah oo leh kamarad pop-up ah
Xiaomi waxay bilaabi laheyd taleefan casri ah oo leh kamarad pop-up ah. Raadi wax dheeraad ah oo ku saabsan taleefannada casriga ah ee sumadda Shiinaha ay ku bilaabi karto sannadkan suuqa.
Samsung ayaa soo saartay nooc cusub oo 2019 ah oo ah Galaxy Tab A 10.1 gudaha Jarmalka
Samsung waxay ku soo bandhigtay Jarmalka nooc ka mid ah 2019 ee Galaxy Tab A 10.1, oo ah nooc ka jaban oo leh astaamo caddaalad ah.
Go'aannada shaandhaysan iyo ilaaliyayaasha shaashadda ee Huawei P30 iyo P30 Pro
UAProf-ka Huawei P30 iyo P30 Pro ayaa la arkay oo la xaqiijiyay qaraarada shaashadooda. Ogow dhammaan faahfaahinta!
Tikniyoolajiyada indha-sarcaadka indhaha ee 10o ee loo yaqaan 'Oppo's 2019x zoom optical' si loo soosaarayo qeybtii labaad ee XNUMX
Oppo wuxuu ku dhawaaqi karaa 10x tiknoolajiyada indhaha ee MWC 2019, oo ah isla kii hore loo soo bandhigay dhowr toddobaad ka hor bishii Janaayo.
Xiaomi Mi 9 wuxuu la imaan doonaa shaashadda ugu dhakhsaha badan shaashadda dhammaanteed
Xiaomi Mi 9 wuxuu ku imaan doonaa shaashadda ugu dhakhsaha badan shaashadda dhammaan, sida ku cad xaqiijinta rasmiga ah ee ugu dambeysay ee la soo saaray.
Tusaalooyinka sawirradan waxay muujinayaan awoodda kamaradda Xiaomi Mi 9
Tusaalooyin taxane ah oo sawir ah ayaa la daabacay oo muujinaya dhammaan awooda kamaradda Xiaomi Mi 9. Miyaad seegaysaa iyaga?
Oppo's patent-ka casriga ah ee isku laaban iskuulada ayaa muujinaya nashqadaha
Faahfaahin cusub oo patent-ka ah ayaa soo baxday oo muujinaysa naqshad cusub oo loogu talagalay taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'Oppo'. Qalabka ugu horreeya ee tusaalaha ah wuxuu imaan doonaa MWC 2019.